‘Hupenyu hunoda kutsungirira’ | Kwayedza
05 Oct, 2018 - 00:10	 2018-10-04T11:21:34+00:00 2018-10-05T00:04:08+00:00 0 Views
MUIMBI wechidiki ari kusimukira mumusambo wechitendero – Admire ‘Minister’ Sibanda (25) – anoti hupenyu hunoda kutsungirira pamwe nekuvimba naMwari sezvo iye akambosvika panguva yekufunga kuzviuraya mushure mekunge aomerwa nehupenyu.
“Jesu ndiye mudzikinuri wangu nemuponesi wangu saka ndinoimba ndichimutenda kuti zvino ndazomuwana. Handichikwira BP nematambudziko enyika nekuti ariko anondirwira. Kuzoti mune rwumbo rweChiRungu – I Declare – ndinoramba zvese zvakaipa kuti zvisanditevere ndichitevera Jesu wangu. Handichada upenyu hwematambudziko, hurombe, kushorwa nezvimwe zvinounza marwadzo nekuti ndinovimba kuti Mwari vaneni uye ndiri kuona budiriro muupenyu hwangu kuburikidza nekubata kwavo,” anodaro.